OWASP Ngalaba Nkọwa 10 kachasị maka nchekwa ngwa - ITS Tech School
OWASP - ma ọ bụ Open Web Application Security Project - bụ ndị na-abụghị ndị nwere ikikere nke na-arụ ọrụ kachasị mma na iwu maka atụmatụ, ime, ịmepụta, na ịchekwa ngwa weebụ. OWASP Top 10 bu oru ngo ugbua na ugbua, weghaara otu ihe kachasị elu 10 iji merie, n'etiti usoro ndụ ndụ na-aga n'ihu na-ekwenye na ngwa weebụ dị na nchebe site na mbido.
OWASP Top Ten Proactive Controls 2016 na-atụ aro ka e nweta Top 10 Critical Areas for Security Application nke a ghaghị ichebara maka ọrụ ọganihu ngwaahịa ọ bụla. Ngwa mmemme ndị na-enweghị nchebe enweghị enyemaka na mwakpo elu. Ịme mkpuchi weebụ ngwa ngwa bụ mkpa kachasị mkpa maka ọrụ ọganihu ngwaahịa, na òtù OWASP na-enyere ndị injinia aka inweta njehie nke ndị ọzọ, ya mere, ha kwesịrị ịma banyere ihe ize ndụ ndị dị egwu na enweghị ike.
Nke a bụ ihe a ga-esi na ya pụta site na ịrịọ maka otu akụkụ nke ederede nke ndị engineer ga-atụle mgbe ha na-eme ngwa:
Usoro Nchọpụta Intrusion na Ịdekọ
Chọpụta Nche n'oge na mgbe ọ bụla o kwere omume
Ndebanye aha niile Ntinye
Mmezi nke Nyocha na Njirimara Njirimara
Jiri akwukwo ogugu Nche na Frameworks
Nwepụ na Njehie
N'iburu n'uche ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a, ndị na-ahụ maka ntanetị weebụ ga-enyocha nlezianya anya ma mesịa gaa n'ihu n'ihu iji mepụta ngwa ngwa ha. OWASP Asambodo site na nchepụta nke a na-eche na ọ ga-eme ka ụzọ dị mma maka ndị injinia iji mee nhọrọ kachasị mma iji jide n'aka nchebe ihe ngosi ha
Ntuzi akwukwo EC-Council: Akwukwo